Amafayela atholakala ku-inthanethi nge-OneDrive > UVielhuber David
Amafayela atholakala ku-inthanethi nge-OneDrive10
Uma I-OneDrive, Eyinqolobane, I-Google Drayivu, OwnCloud, Ibhokisi.net: Akunandaba nebhokisi ogcina kulo amafayela akho - izinsizakalo zicishe zifane. Amaklayenti atholakalayo kuwo wonke amadeskithophu namasistimu eselula, amafayela angajwayelekile abetheliwe kanye nezinketho zokwabelana ziyehluka kuphela. Kepha i-OneDrive, efakwe ohlelweni kusukela ku-Windows 8.1, inesici esikhethekile: amafayela atholakala ku-inthanethi kuphela.
Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukufinyelela kuyo yonke i-database ngaphandle kwamafayela athathe indawo yokugcina ebonakalayo. Imininingwane ye-meta kuphela efana nezikhathi ze-MAC ezigcinwa ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi, ukuze amafayela ezwe sengathi ayatholakala endaweni. Uma uvula ifayela ku-Explorer elitholakala kuphela ku-inthanethi, lilandwa ngokuzenzakalela ngemuva bese lenziwa litholakale unomphela ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ikholomu "Yokutholakala" kuphela eveza ukuthi amafayela atholakala kuphi ngempela
Amafayela atholakala ku-inthanethi angatholakala futhi kusesho lweWindows. Imenyu yamasethingi ingasetshenziselwa ukwenza wonke amafayela atholakale emhlabeni wonke ungaxhunyiwe ku-inthanethi noma ku-inthanethi kuphela - ngokuchofoza kwesokudla ku-Explorer, amafayela ngamanye namafolda nawo angalawulwa ngobuningi. Ngesici esisha, iMicrosoft idale ukusebenza okuphezulu kakhulu futhi okuphumelelayo okubeka eminye imiqondo njengokuvumelanisa okukhethiwe kweDropbox emthunzini.